Susa imvelaphi kumfanekiso okwi-intanethi: iinkqubo zokwenza kube lula | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Susa imvelaphi kumfanekiso okwi-intanethi
Baninzi abathi, emva kokuthatha ifoto, bafune ususa njani imvelaphi ukusuka kumfanekiso okwi-intanethiKungenxa yokuba kuphume into abangayithandiyo, kuba bafuna ukucima iindawo ezithile, okanye ngenxa yokuba befuna ukufumana ezo zinto zefoto kwenye indawo.
Nokuba yeyiphi imeko yakho, kuya kufuneka wazi ukuba zininzi iindlela zokwenza, kwaye kulula ukuyiphumeza. Kodwa kuya kufuneka ubenezimvo ezithile ngaphambi kokuba uyenze. Ke, apha siza kukunika izixhobo ezibonakalayo zokuphelisa imvelaphi yomfanekiso kwi-intanethi ngokulula (kwaye simahla). Ngaba siyayifumana?
1 Kutheni ususa imvelaphi kumfanekiso
2 IiWebhu ukususa imvelaphi yomfanekiso kwi-intanethi
2.3 Ukunyuka koMlingo
2.7 Isiza esingasemva
Kutheni ususa imvelaphi kumfanekiso
Khawufane ucinge ukuba wenze umfanekiso omhle nje. Kwaye oku, njengoko kucwangcisiwe, kungasetyenziselwa ukuyifumana kwindawo oyenze kuyo, kodwa nakwezinye iindawo, ezinjengamanye amazwe, izikhumbuzo, njl. Izinto ezicaphukisayo, imigca ngasemva komfanekiso, okanye nabantu abenza izijekulo ongazithandiyo (okanye abangapeyinti efotweni). Konke okungasuswa, nangona kuya kuxhomekeka ekubeni ufuna ukususa imvelaphi okanye into enye.
Ngokwenyani, zininzi izizathu zokususa imvelaphi kumfanekiso, kwaye ngelixa kwakunzima ukufezekisa ngaphambili, akunjalo ngoku. Zininzi izixhobo ezinokusetyenziswa ngaphandle kokuba nombono wokuhlela umfanekiso kwaye, kwimizuzwana nje, ubuyisela umfanekiso ngaphandle kwemvelaphi. Ngaba siza kuthetha ngabo?
IiWebhu ukususa imvelaphi yomfanekiso kwi-intanethi
Ukuba unomfanekiso, lixesha lokuba siqale ukusebenza nezinye iiwebhusayithi eziza kukunceda ufumane loo foto ngaphandle kwemvelaphi. Njengamaphepha ewebhu, ungasebenza kumfanekiso kokubini kwi-PC yakho nakwiselfowuni yakho. Oko kukuthi, awudingi ukuba nekhompyuter ukuze uyenze, kodwa ungasebenza nayo ngqo kwifowuni yakho.
Siqala ngewebhusayithi eyaziwayo kwaye, ngokweengcali, yenye yezona zilungileyo unokuzisebenzisa. Nje ukuba ube nomfanekiso olayishiwe, kuya kufuneka usebenzise ibrashi ukuxelela ukuba zeziphi izinto ofuna ukuzicima kwaye kunjalo. Elula njengaleyo.
Ngoku, ukusebenza nesixhobo, ngakumbi ukuba kunyanzelekile cima iindawo ezikufutshane kakhulu nezinto okanye abantu ukuba ufuna ukushiya, kungcono usebenzise ikhompyuter ukuze ukwazi ukusondeza emfanekisweni kwaye unganqumli okushiyekileyo.
Esi sixhobo ngokwenyani lelona nqanaba liphambili ekuhleleni umfanekiso, kwaye liyafana neFotohop, kodwa simahla. Kwabaninzi, iPixlr lelona phepha libalaseleyo kwi-intanethi ukuhlela imifanekiso. Kodwa inengxaki kwaye kukuba ufuna ulwazi oluncinci ukuze usebenze kakuhle nayo (kungenjalo uya kulahleka).
Malunga nendlela enza ngayo, inyani yile ukusebenza kwayo kuyafana nakwi-Photoshop, ke ukuba uyazi ukuba ungayenza njani kwinkqubo, ungayenza ngokulula kuyo.
Ewe kunjalo, xa ufuna ukusebenza ngakumbi kubunzulu, kungcono ukuyenza kwikhompyuter.
Esi sixhobo sinobukrelekrele bokuzenzela, oko kukuthi, wakuba ulayishe ifoto, iya kuzama ngokuzenzekelayo ukucima imvelaphi yomfanekiso ngokwawo, ngendlela yokuba, kwimizuzwana nje, uya kuba nefoto yoqobo kunye nesiphumo ngemvelaphi ebonakalayo. Yintoni engalunganga? Sukuba nexhala, ikunika uthotho lwe izixhobo zokunciphisa ukusika, ukuwucokisa kwaye ugqibelele xa ususa imvelaphi kumfanekiso okwi-intanethi.
Kodwa inengxaki, kwaye ke iziphumo ziya kunikwa i-watermark, kwaye ukuba awufuni ukuba ivele emva koko kuya kufuneka uhlawule ngesicwangciso.
Awufuni ukuhlawula kwaye ufuna isixhobo esingama-100% simahla? Ewe, le yenye yezinto onokukhetha kuzo, esebenza ngendlela efanayo naleyo yangaphambili, ineziphumo ezifanayo.
Kuya kufuneka ulayishe umfanekiso kwiphepha, ngasekhohlo, kunye nesixhobo esikunika sona, kuya kufuneka Landela ulwandlalo lwento yonke ofuna ukuhlala kuyo. Nje ukuba ugqibile, uya kunika iqhosha eliluhlaza apho uya kuphawula indawo ofuna ukuyigcina kunye neqhosha elibomvu lokucima into ongayifuniyo. Kuya kufuneka ubethe Guqula ukuze ufumane iziphumo.
Kule meko, esi sixhobo sikwi-Intanethi sesinye sezona zilungileyo, ngakumbi kuba unesifundo esikukhokelela inyathelo ngenyathelo. Ingasetyenziswa kwiWindows, iMac kunye ne-iOS kwaye kufuneka nje layisha umfanekiso kwaye mvumele enze umsebenzi, kuba isiphumo siya kuba ngokuzenzekelayo (emva koko unokusebenza kuyo ukuyifezekisa).
Icala elisezantsi kuphela kukuba, ukuba ufuna umfanekiso womgangatho ophezulu, kuya kufuneka uhlawule, kodwa ezinye iimpawu ziyakuvumela ukuba uzikhuphele simahla.
Masihambe nesinye isixhobo ukususa imvelaphi yomfanekiso ngokulula. Ukwenza oku, kuya kufuneka beka imvelaphi kwaye, kwimizuzwana, ifoto iya kuvela ngaphandle kwemvelaphi.
Phambi kokuba isixhobo silinganiselwe kubuso nje, kodwa ngoku siyakuvumela ukuba usisebenzisele izilwanyana, izinto, abantu, njl. ngaphandle kokutshabalalisa nantoni na. kwaye eyona nto intle kukuba iziphumo zilungile.
Esi sicelo, se-Android kuphela, siya kukuvumela ukuba ususe ngokulula imvelaphi. Kuya kufuneka ucofe kwinto ofuna ukuyicima kwaye usetyenziso luza kukhathalela ukusebenza kwendawo ukuze libe lihle kangangoko. A) Ewe uya kufumana umfanekiso onemvelaphi ebonakalayo ungasisebenzisa kuyo nayiphi na into oyifunayo.
Nje ukuba ufumane iziphumo, ikuvumela ukuba udwelise iziphumo, kodwa kunye nokususa ngesandla.
Kule meko silumkisa ukuba ayisiyi-app yasimahla, kodwa ibiza ii-euro ezimbini. Kodwa kunokuba kufanelekile kuba sesinye sezixhobo ezilungileyo zokususa imvelaphi yomfanekiso okwi-Intanethi, kule meko ngeselula yakho.
Iyafumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS kwaye iyakwazi ukucima imvelaphi, kodwa nayo nayiphi na into echaphazela kakubi ifoto yakho. Nkqu ikuvumela ukuba ubandakanye imvelaphi onayo kwigalari yomfanekiso wakho ukwenza umsebenzi wokuhlela opheleleyo.
Kukho izixhobo ezininzi kwi-Intanethi ukususa imvelaphi yomfanekiso. Ngaba ungasicebisa ngakumbi ukuba uyazi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Susa imvelaphi kumfanekiso okwi-intanethi
Amaphepha ali-9 amahle okuhlela iifoto kwi-intanethi